भारतमा बिरामीको शरीरबाट ७.४ किलोको मिर्गाैला निकालियो
Wednesday, 27 Nov, 2019 10:14 AM
काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित सर गंगाराम अस्पतालमा युरोलोजी विभागका चिकित्सकहरूको टोलीले बिरामीको शरीरबाट ७.४ किलोको मिर्गाैला निकालेका छन् । यो भारतमा बिरामीको शरीरबाट निकालिएको अहिलेसम्मकै ठूलो मिर्गाैला हो ।
यसको लम्बाइ २१.८ सेन्टीमिटर रहेको छ । यो विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो मिर्गाैला भएको बताइएको छ । यो दुर्लभ शल्यक्रिया लगभग दुई घण्टा चलेको थियो । शल्यक्रिया टोलीमा डा. अजय शर्मा, डा. सचिन कथुरिया र डा. जुहिल नानावटी रहेका थिए ।
डा. सचिन कथुरियाका अनुसार दिल्लीको ५६ वर्षको बिरामी शरीरबाट उक्त मिर्गाैला निकालिएको हो । उनी आनुवांशिक डिसअर्डरबाट ग्रस्त थिए । डा सचिनले भने, ‘अहिलेसम्म यस प्रकारका दुई दुर्लभ शल्यक्रिया भइसकेका छन् । पहिलो अमेरिकामा –८.७ किलो र दोस्रो नेदरल्याण्डमा –७.७ किलो मिर्गाैला निकालिएको थियो । अब हामी यसलाई गिनीज वर्ल्ड अफ रेकर्डमा रेकर्ड गर्न तयारी गर्दैछौं ।’